स्वाइन फ्लु जाँच अपुग, थप २१ जनामा पुष्टि
Saturday, 28 February 2015 03:41
स्वाइन फ्लुले महामारीको रुप लिने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले चौबीसै घन्टा परीक्षण सेवा दिनुपर्ने शंका लागेर परीक्षण गराउन आएका बिरामीसमेत जाँच्दैनजाँची फर्कन बाध्य भएका छन् । टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा शुक्रबार दुई बजे नै परीक्षण सेवा बन्द भएपछि १५ जना बिरामी जाँच्दैनजाँची फर्कन बाध्य भए । मोडल अस्पतालमा अध्ययनरत काठमाडौंकी सफला थापाले भनिन्, 'बिरामीको सम्पर्कमा हामीलाई जानैपर्छ । रुघा लागिरेहेको छ । ज्वरो पनि आयो । त्यही भएर परीक्षण गराउन आएको, तर ल्याब बन्द भइसक्यो रे। अब कहाँ जाने होला ?' खोटाङ घर भई काठमाडौं बस्दै आएका भानुभक्त पनि टेकुको प्रयोगशालाबाट निरास भएर फकिर्ए । 'रुघाखोकी लागिरहेको छ, ज्वरो पनि आएको छ । त्यही भएर आत्तिदै परीक्षण गराउन आएको थिएँ', उनले भने, 'ढिलो भएकाले परीक्षण हुन्न भन्नुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मीहरु। यस्तो बेलामा त हामीले जुनसुकै समयमा सेवा पाउनुपर्ने हो।'
स्वाइन फ्लु (एन्फुएन्जा एचवानएनवान ०९ पेन्डामिक) को संक्रमण पुष्टि हुने क्रम तीव्र रुपमा बढेपछि घाँटीको र्याल परीक्षण गराउन आउने बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । दैनिक ५० जनाभन्दा बढी शंकास्पद बिरामी संक्रमण परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पुग्ने गरेका छन् । शुक्रबार नै ३९ जनामा परीक्षण गरिएको छ । तीमध्ये २१ जनामा स्वाइन फ्लुको संक्रमण पुष्टि भएको छ । टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. गीता शाक्यका अनुसार शुक्रबार २१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै पछिल्लो दुई सातामा ३५ जनामा स्वाइन फ्लुको संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीनजनामा 'एन्फ्लुएन्जा बी' पुष्टि भएको छ । संक्रमित हुनेमा काठमाडौंका आठ वर्षीय बालकसमेत छन् । संक्रमण पुष्टि भएपछि बालकको परिवार चिन्तित भएको छ । संकलित नमुना बोकेर परीक्षण लागि प्रयोगशालामा आउने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । शुक्रबार मात्रै मोडल अस्पतालबाट २५ जनाको नमुना सकंलन गरी प्रयोशालामा परीक्षणका लागि ल्याइएको छ । परीक्षण गराउन आउने बिरामी बढे पनि त्यसअनुसारको जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राहीले समयमै रिपोर्टसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
संक्रमितमध्ये अधिकांश काठमाडौंका छन् भने दुईजना पोखरा, तीनजना चितवन, धनुषा, नवलपरासी र गोरखाका एकएक जना छन् । सरकारले संक्रमित भएकालाई अस्पतालमा छुट्टै (आइसोलेसन) वार्डमा उपचारको व्यवस्था नगर्दा एक बिरामीबाट परिवार नै संक्रमित हुने जोखिम बढेको छ । प्रयोगशालाका कर्मचारीले संक्रमण पुष्टि गर्दै घरमा छुट्टै बस्ने, झोलिलो पदार्थ खाने, मास्क लगाउनेलगायत परामर्श दिँदै बिरामीलाई घर पठाउने गरेका छन् ।
परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले उपत्यकाबाहिर पनि स्वाइन फ्लुको परीक्षणका लागि नमुना संकलनको व्यवस्था गरेको भने पनि त्यसो नभएको पाइएको छ । परीक्षणको सेवाको अभावमा संकास्पद बिरामी काठमाडौं आउन बाध्य भएका छन् । 'त्यति ठूलो सहरमा परीक्षणको सेवा दिन सकेको छैन सरकारले', वीरगन्जबाट झन्डै चार हजार रुपयाँ तिरेर हवाईजहाजमा काठमाडौं आइपुगेकी मालनी कुशवाहाले भनिन्, 'स्वास्थ्य जाँच त गर्नुपर्यो। त्यही भएर आत्तिएर आएकी हुँ ।'आफैं पनि स्वास्थ्यकर्मी रहेकी उनले सरकारले भारतीय सीमा जोडिएका जिल्लामा संकलनको व्यवस्था नगर्दा स्वाइन फ्लुको जोखिम बढेको बताइन् ।